[Ankapobeny ] 31 Oktobra, 2008 08:40
Asa ianareo raha mahatsikaritra fa ny zavatra mandeha @ fahitalavitra dia miraikitra ao an-tsain'ny ankizy. Tato ato izay mantsy dia maro ireo dokam-barotra mandeha @ fahitalavitra. Eo ohatra ny Fresh vokarin'ny orinasa star izay namoaka karazana fresh vaovao misy tsirom-boankazo hafa toy ny frezy ny paoma ary menth dia ilay tena fresh fahiny koa mazava ho azy. Tsara tokoa ny tsiron'ity fresh ity raha ho ahy manokana. Iny aloha tsy olana na dia misy alcool kely ihany aza satria natao azo sotroin'ny daholo be izy iny tsy mitovy @ ilay cousin-ny soavaly 3 mampalaza an'i Madagasikara. Eo koa ny Lite karazany hafa ihany koa io tsy mahamamo ihany koa ny misotro azy io fa somary mangidy ihany koa ity farany.
Ny tena manitikitika ny saiko kosa anefa dia ilay zava-pisotro iray ao anaty kanety irony izay karazana manome tonus ny olona irony izany oe mampatanjaka izany ilay izy. Ny dokam-barotra rahateo moa dia tovolahy iray mikotrana basikety miaraka ny akama no somary tsy ampy vovokaina no nahazo kely @ ilay zava-pisotro ao anaty kanety ity tonga dia mahazo hery avy hatrany izy avy eo ary hita ho mavitribitrika izay tsy izy no tsy miraty arato mihitsy na iray aza avy eo. Ilay kanety misy soratra oe Dynamic koa tena manintona maso be ny paoziny ary tena mahate hanadrana ihany koa. Indro kely anefa hoy ny mpandrafitra izay satria tsy azo sotroin'ny ankizy latsaky ny 5 taona izy ity. Sarotra anefa ny handrara ny ankizy satria tsy ary ho arakao izay vidiny any @ vatsiny omenao azy. Voalaza tokoa mantsy fa efa misy ankizy marary nisotro azy ity any @ hopitaly hoy ny kidaona maraina omaly.
Mahatsiaro ilay tranga tany Bresil aho ilay tovolahy nisotro coca kely tao anaty kanety ary no avy eo nihinana bonbon menth tonga dia maty tsy tra-drano satria nifangaro tao akibo ilay rano sy ilay bonbon ka niteraka rivotra be no nadroatra be tokoa.Voalaza moa fa tena mitovy ireny baomba ireny mihitsy izy ity rehefa mifangaro. Ka manaitra ny tompon'andraikitra ihany @ izao zavatra izao sao dia ahitana loza.
Niampy iray indray ny fahitalavitra eto andrenivohitra. Tonga soa i LTV izay azonao jerena eo anelanelan'ny Tvplus sy ny Mbs ny marindrefy ahitana azy. Voalohany rahateo @ irony fahitalavitra fitoriana ny filazan-tsara irony izy ity. Tsy mbola fantatra marina moa izay tena tompony fa mbola karazana essai tekinika ihany aloha hatreto.
[Ankapobeny ] 28 Oktobra, 2008 09:28
Marary ny cyprès!
Maina ny akamaron'ireo fefy cyprès eto Antananarivo. Voalaza fa misy bibikely mihinana izy ireny dia tapitra maina sy maty avokoa! Marihina fa maina hatrany @ fakany ity hazo ity hoy ny nahita maso ireo fefy manodidina an'Antananarivo toy ny etsy Ankorondrano ohatra. Asa izao izay fanefitra atao @ izy ity fa tena mihanaka mihitsy ity bibikely manimba hazo ity. Ny koroka aloha no tena fahenoko fa ilay biby mihinana cyprès ity tena mbola tsy haiko tsara.
Manomboka mirotsaka ny orana eto Andrenivohitra na dia mbola tsy tena mahavonto ny tany aza dia mba efa mampisento kosa ny firotsahany.
Tapaka tontolo andro kosa omaly ny lalana teny @ Digue noho ny fisin'ny fiara kamio kely nandona poteau ny jirama. Nidaraboka t@ tany moa ny andrin-jiro ka nimbahana ny arabe ary ilay fiara koa nivadika teo @ arabe ihany. Tsy nisy aina nafoy akory fa ny zavatra simba no betsaka.
Ireo indray aloha ny vaovao hany mba henoko androany.
[Ankapobeny ] 23 Oktobra, 2008 08:44
[Ankapobeny ] 22 Oktobra, 2008 07:43